Tsvaga zvaunogona kuona muLeon fjords | Kufamba Nhau
ari Leonese Fjords inzvimbo iri muCastilla y León iyo yave nzvimbo inonyanya kufarirwa. Iwo anozivikanwa semafjords kunyangwe iri iro dura rakareruka riri muRiaño iro rinonyatso fananidzwa neyakajairika fjords nemifananidzo iyo iyo yatinoona yavo, nekudaro ivo vanonzi vakafanana uye kuti yave nzvimbo inokosheswa zvakanyanya nevashanyi nekuti inokwezva kutarisa.
Izvi Leonese Fjords ari chikamu cheMakomo eCantabrian kugadzira dombo rakakura redombo. Icho chikamu chePicos de Europa park, saka zvirokwazvo inzvimbo inonakidza kupedzisa kushanya kwenzvimbo iyi yechisikigo.
1 Tasvika sei kuLeonese Fjords
2 Nhoroondo yefjords
3 Hugaro muRiaño
4 Chii chaungaona muRiaño
Tasvika sei kuLeonese Fjords
Aya akanaka Leon fjords inzvimbo inonakidza inokwanisa kusvikwa kubva kuguta reLeón. Inogona kusvikwa nekutora iyo N-625 uye iyo N-621 migwagwa. Kubva kuPicos de Europa kune akati wandei migwagwa inouya yakananga kunzvimbo ino kubva kuCangas de Onís uye kubva kuPotes, ichiita kuti ive nzvimbo iri nyore chaizvo ine nyore kuwana kubva kunzvimbo dzakasiyana dzevashanyi mu. Nenzira iyi iko kushanya kwakakosha uko kwatinogona kuita nekukurumidza muzuva rimwe chete kuti tione nzvimbo ino nekumira takanyarara mangwanani mamwe kana masikati mamwe. Gomo reRiaño riri kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwenharaunda. Icho chikamu chePicos de Europa uye zvakare yeRiaño neMampodre Mountain Regional Park.
Iyi nzvimbo iyo nhasi inoshanya kwazvo uye inotaridzika chaizvo inoyevedza uye yakanaka yaive yakanyorwa seimwe yeiyo njodzi dzezvakatipoteredza muSpain muzana ramakore rechiXNUMX. Iyi nzvimbo ine dziva yakawanikwa pamwe nekuita kwemunhu nekuda kwedziva rakagadzirwa neicho chaicho chiri chimiro chisina kuumbwa nenzira yechisikigo. Pasi pemvura yatinoona, mataundi mapfumbamwe ekare akafashidzwa mugore re87, pakavhurwa dhamu. Zvivakwa zvakati wandei zvakafambiswa kuitira kuti zvisarasike, pamwe nemagirigari maviri ekare muAsturleonia maitiro Yakavhurwa mushure mekuratidzira kwakawanda uye pazuva rekupedzisira regore nekuti zuva rakatevera mutemo weEuropean wakatanga kushanda wairambidza rudzi urwu rweprojekti yaive nehunhu hwakadai. Iyo purojekiti yakazoitwa uye vanhu vakadzingwa vanogara muNuevo Riaño.
Mutaundi reRiaño mune imwe pekugara kana chatiri kuda kugara munzvimbo kuti tifarire nzvimbo dzepanyama nerunyararo. Pane musasa unopa mitengo yakanaka uye zvakare bungalows. Kune rimwe divi, mutaundi reRiaño mune dzimwe pekugara senge dzimba, dzimba dzekumaruwa kana hotera.
Chii chaungaona muRiaño
Mutaundi iri tinogona kuona zvimwe zvinhu zvinonakidza senge zviyeuchidzo zvakatamiswa zvachose kubva kumaguta ekare aive pasi pemvura. Iyo Chechi yeMukadzi wedu weRosary Iyo iri padyo nezambuko pane diki promontory iyo inopa kwakanyanya kuona uye yakanaka pikicha. Iyo tembere yeRomanesque kubva muzana ramakore regumi nematatu rakatamiswa dombo nedombo kuenda kunzvimbo iyoyo. Mukati mechechi zvinokwanisika kuona Baroque, Romanesque uye Gothic mifananidzo. Kupinda kuri mahara uye zvinokwanisika kuwana gwara uyezve nedzimwe tsananguro yenhoroondo yetembere.
Kana iwe uri muchechi iwe une iyo poindi yakanaka yekutanga Kufamba kweChirangaridzo. Kufamba uku inzira yevanofamba-famba iyo yakakomberedza nzvimbo yedziva kuti unakirwe nemaonero akanaka. Mukufamba uku kune mabhenji akati wandei ane zvisingaite maonero ekutora mifananidzo mikuru. Mabhangi akaiswa munzvimbo dzakakosha ane mukurumbira nhasi uye ndosaka tichigona kuawana munzvimbo dzatinofanira kuva nemaonero akanakisa.
El Ethnographic Museum yeRiaño ndiyo nzvimbo inoratidzwa nhaka yetsika dzakakurumbira kubva kuGomo reLeonese reRiaño. Mazana ezvimedu zvekare anoratidzwa mune ino mamuseum, mazhinji akapihwa nevavakidzani kugadzira poindi yekufarira yekuratidza tsika yavo kuvashanyi. Parizvino unogona zvakare kuona dzimwe nharaunda dzakadzokororwa senge Imba yeUtsi kana yechinyakare forge. Muchivara chimwe chete chiripo miziyamu, unogona zvakare kuona zvimwe zvinhu zvakaita seyakajairwa Leon hórreo, mwana wembongoro kushangu mombe uye dumba remufudzi.
Munzvimbo ino yeLeon fjords zvakare zvinoita kuti unakirwe akasiyana maonero uye kukwira nzira. Kuita iyi nzira dzakasiyana-siyana iwe unosvika kune akati wandei maonero ane makuru maonero. Iyo Mirador de las Hazas neValcayo inzvimbo dzinogona kungosvikwa netsoka, sezvo iri migwagwa yakasviba. Iyo yakanaka nzira yekugona kunakidzwa nemhuri uye kunyangwe nemhuka, pakati pezvisikwa uye nemaonero akanaka eiyo fjords nemakomo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Leonese Fjords